I-APRON SINK VS FARMHOUSE SINK (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Apron Sink vs Farmhouse Sink (Isikhokelo soYilo)
I-Apron Sink vs Farmhouse Sink (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu umahluko phakathi kwesinki yefestile vs indlu yasemaphandleni kubandakanya ubungakanani, izixhobo kunye noyilo.
Kwiimeko ezininzi isinki yefestile kunye nesinki esefama zifana kakhulu. Kutheni inokuba namagama amabini ahlukeneyo emva koko ubuze? Esi sisicwangciso sentengiso. Ngokutshintsha igama ukusuka kwisinki yendlu yefama iye kwi-apron sink ayisekho imida kwezi iintlobo zeesinki Ukusetyenziswa nje kumakhaya endlela yefama.
Emva kokutshintsha kwegama kwenzeka, ifaskoti isinki emva koko yavela yohlobo lwesinki entsha enezinto ezahlukeneyo ezisetyenziswayo. Oku kuyenza ibe bhetyebhetye ngakumbi kwezinye iindlela zekhitshi, ngelixa indlu yasefama ithatha ikeyiki nakweyiphi na indlela yasekhitshini.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwi-apron sink kunye ne-farmhouse sink kukuba yonke ingongoma yazo kukugcina ii-countertops kumonakalo wamanzi.
Intombazana kunye noMatron wozuko
Ezi sinki zenza ngeendlela ezahlukeneyo; isinki yendlu yasefama yindawo ezimeleyo, kude neetafile zokubaleka, kwaye isinki yefaskoti isika icandelo elisesichengeni sokubala. Olu luncedo olukhulu xa usebenzisa ilitye lendalo, okanye ezinye izinto ezinokungena ngokwemvelo kwii-countertops.
Umahluko phakathi kokuntywila kwefama kunye nesinki yefowuni?
Umahluko wobungakanani bokuntywila
Yintoni eyenza ukuba ifaskoti isinki yahluke kwisinki esemgangathweni?
I-Apron Sink vs Umahluko weNdlu yokuCofa kweZinto
Iifama zasekhitshini zasendlini yokufama zenzelwe ukuba zisebenze kakhulu. Oku kukhokelele kwisinki ihlala ineebheyi ezininzi kwisinki enye, kunye nendawo yokomisa edreyini. Bona eminye imifanekiso isitya esiphindwe kabini Apha.
Banomqolo omkhulu wokubuyela umva kunye nongqameko olujikelezileyo ukugcina onke amanzi kwindawo esinki, endaweni yomgangatho.
Isinki iphela yenziwa ngesiqwenga esikhulu sokwenza izinto, esiyi-enameled iron cast. Ngokuba sisiqwenga esinye esikhulu iyayiphepha nayiphi na imitya enokuqokelela amanzi okanye ibambe iintsholongwane.
Ngawo onke la manqaku, ezi sinki bezisoloko zikhulu kangangokuba bezizezazo kwaye zinganyanzelekanga ukuba zibengaphezulu. Banokuqhotyoshelwa, kodwa bekungasoloko kunjalo kuba bekungcono kwiikhitshi ezincinci ukuba zahlulwe.
Izimvo zesikhumbuzo seminyaka eli-10 kuhlahlo-lwabiwo mali
Kwezinye iikhitshi ezincinci kakhulu isinki yesinki inokongezwa kwigumbi elahlukileyo, kodwa oku bekwindabuko endala kakhulu, kuhlala kukho iintlobo zamakhaya eziphakamileyo.
Isiko elihle ikhitshi enefestile ngaphezulu kwesinki .
Iifama zendlu yokufama zihlala zinkulu kakhulu, zinzima kwaye zinzima kakhulu. Olu luhlobo lwakudala, lwesiqhelo lendawo yokuntywila kwindlu yasefama, xa kuthelekiswa necandelo elilandelayo malunga nesinki yangoku yefaskoti.
Ngokuchasene noko, i-apron sink yeyona nguqulelo yanamhlanje kwaye iguquguqukayo yale ndlu ekhankanywe ngentla yefama.
Iifenitshala zeepron zihlala zincinci kakhulu kunesinki yendlu yasefama, kwaye zinokubekwa kulungiselelo lwekhawuntari, endaweni yokufuna ukuba liziko lazo.
Iifroni ezisinki zinokukwenza i-backsplashes kunye nendawo yokomisa ukunciphisa ubungakanani bayo kancinci. Emva kwayo yonke le mihla, ifaskoti isinki iza kuba kunye nomyinge ophakathi, isinki enye ukuya kwezimbini.
Ngoku, yintoni eyenza ifaskoti itshone yahlukile kunayo nayiphi na isinki esemgangathweni enokusetyenziswa ekhitshini? Indlela le sinki ibekwe ngayo kwikhawuntara iya kuba yeyona nto inomdla kwaye iyingqayizivele yesinki.
Eyona ndlela yokucoceka kwendandatho yokuzibandakanya
Isinki esemgangathweni iya kuphoswa emngxunyeni kwindawo esecaleni kwetheyibhile, ukuze ubone kuphela umphezulu wesinki. Isinki efestile isika eli candelo langaphambili le-countertop ngokunjalo, xa isinki ekubekwe kuyo unokubona umphambili kunye nomphezulu wesinki.
Oku kuluncedo ukuba i-countertop onayo ayilunganga ngokukodwa ngamanzi, kuba ke unamathuba amancinci okuwonakalisa.
Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, izindlu zokufama zitshona ngakumbi zihlala zenziwe ngentsimbi ebunjiweyo, kwaye ngamanye amaxesha ludongwe lomlilo. Oku kunika inkangeleko yexesha lakudala lendlu yasefama kunye nobuhle bendabuko obuphuma kwisitayile sefama yasefama.
Le yenye yezinto ezinomda kumzi wokuntywila kumzi wasefama kuba isibheno sihlala sikwizinto zesintu kwaye kujongeka kwindawo yokuntywila. Kule mihla, ezi zinokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, ukuba imbonakalo oyifunayo isenokufezekiswa.
Xa kuziwa kwisitya se-apron, esiphinda siyindlela yangoku, eguquguqukayo yesinki esefama, zihlala zenziwe ngezinto ezifana nentsimbi engenasici, i-granite edityanisiweyo kwaye ngamanye amaxesha nkqu nobhedu kuxhomekeke kubuhle obunqwenelekayo.
Ukukhethwa kwezinto eziphathekayo kwi-apron sink kuninzi kakhulu ukuguquguquka njengoko kungenakudinga ukubonisa ubuhle beminyaka kunye nesiko. Isinki ye-apron inokutyibilika ngaphakathi kunye noyilo lwesitayile seminqweno ngokulungelelanisa izinto kunye nezinye izinto ezikwi-space.
Ngenye inqaku elinxulumene noko ndwendwela eyethu iintlobo zeefompo zasekhitshini Isikhokelo.
Iminyaka emi-3 yezimvo zesipho